वीर्य स्खलन ढिलो हुने समस्या के हो ?
वीर्य स्खलन ढिलो हुने समस्या के हो ? यसको उपचार के होला ?
कतिपय भौतिक वा मानसिक कारणले कुनै पुरुष गाह्रो गरी चरमसुखमा पुग्छ वा स्खलित हुन असमर्थ छ भने यस्तो यौनिक समस्यालाई ढिलो स्खलनका रूपमा लिइन्छ। ढिलो स्खलन हुने समस्या भएकामा पुरुष यौनांग उत्तेजित अवस्थामा भएर पनि योनिमा लिंग छिराएर स्खलित हुन धेरै बेर लाग्छ। कतिपय त स्खलित हुन नै नसक्ने हुन्छन्। आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ। करिब एकदेखि चार प्रतिशत पुरुष यस्तो समस्याबाट प्रभावित भइरहेका हुन्छन्। जसका कारण पार्टनरहरूबीच तनाव, छटपटी र असन्तुष्टि पैदा हुन जान्छ।
ढिलो स्खलन हुने समस्याबाट चिन्तित पुरुषमा यौनेच्छा कम हुने र यौनिक असन्तुष्टि बढ्न सक्ने हुनाले ‘अपमानित हुनुपर्ला कि’ भन्ने डर हुन्छ। बच्चा पाउने चाहनाले दाम्पत्य जीवनमै समस्या निम्तिन सक्छ। धेरैजसो पुरुषले आफ्नो जीवनकालमा ढिलो स्खलनको अनुभव गरे पनि कसै–कसैमा यो समस्या जीवनभर हुन्छ।
धेरैजसो मानसिक कारणले हुने यो यौनिक समस्यामा उत्तेजनाको मात्राअनुसार पुरुष चरमसुखसम्म पुग्न सक्दैन। कतिपय अवस्थामा ढिलो स्खलनको समस्या हुनुमा मानसिक वा जैविक कारण खप्टिन्छ। अवसाद (डिप्रेसन), चिन्ता एवं अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण ढिलो स्खलनको समस्या हुन सक्छ। त्यसै गरी, पार्टनर बीचमा आपसी सम्बन्धमा तनाव, बाल्यावस्थामा यौन दुव्र्यवहार, अन्यसँग घुलमिल हुन गाह्रो मान्ने, अभिभावकबाट तिरस्कृत एवं गलत तरिकाले हुर्काइएकामा पनि यो समस्या देखिन सक्छ।
आफ्नो रिस प्रकट नगर्ने, रमाइलो हुन नचाहने व्यक्ति एवं यौन कार्यलाई पाप मान्ने विश्वास पालेकामा पनि ढिलो स्खलन हुने समस्या हुने गरेको छ। वीर्य स्खलनका बेला पीडा महसुस गर्ने तथा योनि वीर्यको सम्पर्कमा आई गर्भ रहला कि भन्ने डर पालेकामा पनि यो समस्या हुन सक्छ। कतिपयमा भने आफ्नो शारीरिक बनावटको चिन्ताले यौनिक उत्तेजनामा नै बाधा आई, आत्मविश्वासको कमी भई ढिलो स्खलनको समस्या निम्तिन सक्छ।
कतिपय पुरुषको हस्तमैथुनको बानीले पनि ढिलो स्खलनको समस्या विकसित हुन्छ। हप्तामा तीन पटकभन्दा बढी हस्तमैथुन गर्ने बानी परेकामा महिला पार्टनरसँगको प्राकृतिक यौन क्रीडाबाट उत्तिकै मात्रामा यौन आनन्द महसुस नगर्ने हुन्छ। आफ्नो हातले हस्तमैथुन गरी स्खलन गरेको जस्तो पार्टनरको हातबाट वा पार्टनरको यौनांग, मुख वा गुदद्वारमा मैथुन गर्दा पनि यौन असन्तुष्टि भई ढिलो स्खलनको समस्या देखापर्न सक्छ। आफूले हस्तमैथुन गर्दाको कल्पित पार्टनरभन्दा फरक पार्टनरसँग यौन क्रीडा गर्नुपरे पनि यस्तो समस्या निम्तिन्छ।
अमेरिकी मनोविद् प्राध्यापक डा. माइकल पेरेलम्यानले गरेको अध्ययनअनुसार पार्टनरसँगको यौन सम्बन्धमा ढिलो स्खलनको समस्या भएका धेरै पुरुषमा हस्तमैथुनबाट चरमसुखमा पुग्न र स्खलित हुन कुनै समस्या भएको पाइएन। किनकि, कतिपय पुरुषको तौरतरिका अचम्मका हुन्छन्। हस्तमैथुनको बेला तन्ना वा तकियामा यौनांग रगड्ने, कडा दबाब दिई हस्तमैथुन गर्ने र पिसाबनलीमा कुनै सामान छिराई यौन आनन्द लिने कतिपय पुरुषको बानी हुन्छ। यस्तो खालको गतिविधिबाट प्राप्त हुने यौन आनन्द र प्राकृतिक यौन क्रीडामा भिन्नता हुन्छ।
जीर्ण प्रकारको स्वास्थ्य समस्या, शल्यक्रिया वा कतिपय औषधिका कारण पनि ढिलो स्खलनको समस्या देखिन सक्छ। स्नायुमा चोट, सुषुम्ना नलीमा चोट, मस्तिष्काघात, मल्टिपल स्क्लेरोसिस तथा जीर्ण प्रकारको मधुमेहले स्खलन कार्य असामान्य हुन सक्छ। ढल्किँदो उमेर, कतिपय जन्मजात पुरुष जननेन्द्रिय वरिपरिको समस्या, पिसाब संक्रमण, प्रोस्टेटको शल्यक्रिया, मधुमेहका कारण स्नायुमा असर, पिसाबथैलीमा वीर्य फर्किने समस्या केही भौतिक कारण हुन्। शारीरिक संरचनामा खोटका कारण यौन प्रस्तुतिको सरोकार, अवसाद (डिप्रेसन), उच्च रक्तचाप, छारेरोग विरुद्धको तथा पिसाब खुलाउने एवं पीडानाशक औषधिले यो समस्या निम्त्याउन सक्छ। मद्यपान तथा नशालु औषधिका कारण पनि ढिलो स्खलन हुन सक्छ। सामान्य खालको भौतिक समस्याका कारण निम्तिएको स्खलनको समस्याले प्रभावित व्यक्तिलाई चिन्तित बनाउँछ र यही चिन्ताले ढिलो स्खलनलाई झन् समस्याग्रस्त बनाउँछ।
समय–समयमा ढिलो स्खलन हुनु प्रायः पुरुषका लागि सामान्य नै हो। ढिलो स्खलन हुने समस्या रहिरहेमा यस समस्याका कारण पार्टनरमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ। यसो भएमा वा हस्तमैथुनबाट मात्र स्खलन गर्न सकिने भएमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ।
यसका साथै ढिलो स्खलनको समस्या पार्टनरबीच सरोकारको विषय भएमा, अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि ढिलो स्खलनसँग सम्बन्धित भएमा, औषधि लिइरहेको कारण ढिलो स्खलन भएमा चिकित्सकको मद्दत लिनुपर्छ। लामो अन्तरालपछि यौनिक सम्बन्ध स्थापित हुँदा ढिलो स्खलनमा समस्या भएकालाई पनि उपचार चाहिन्छ। त्यसो त मानसिक कारणले हुने ढिलो स्खलनका लागि खासै औषधि छैन। कारण बिनाको ढिलो स्खलनको समस्याको उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ। साइकोलोजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट एवं मनोपरामर्शकर्ताको सहयोग लिन सकिन्छ।
सम्भावित मेडिकल कारण खुट्याइसकेपछि संक्रमण, हर्मोनको असन्तुलन छ कि थाहा पाउनुपर्छ। कारणअनुसार उपचार गर्नुपर्छ। औषधिका कारणले भए वैकल्पिक औषधि प्रयोग गर्ने, अधिक मद्यपान वा अन्य नशालु पदार्थका कारण भएको हो भने ती वस्तु छोड्नुपर्छ।